by အန္န Chang
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါ ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်က 1819 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး (UVA), ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု Jeffersonian ဗိသုကာအတွက်မာနထောင်လွှားကြာပါသည်။ သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်, တည်ထောင်သူတစ်ဦးလှပသောသင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုင်စွဲဖို့ UVA ကျောင်းသားများကိုအားပေးတယ်။ သူ Rotunda, ထိုမြက်ခင်း, နှင့် Pavilion ပါဝင်ပါသည်တော်မူသော Academic ကျေးရွာမှတဆင့်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းဖွဲ့စည်းရန်သူ၏ကျောင်းသားများကိုအဘို့ရှာ။ သငျသညျကိုလိုက်နာသောဓာတ်ပုံများအတွက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းတဆင့်တက္ကသိုလ်နယ်မြေဂျက်ဖာဆန်၏ရူပါရုံနှင့်အတူစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကတသမတ်တည်း၏တစ်ဦးအဖြစ်အများဆုံး ထိပ်တန်းအများပြည်သူတက္ကသိုလ်များ တိုင်းပြည်အတွက်ကြောင့်လည်းများအတွက် About.com ကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေးစာရင်းလုပ် ထိပ်တန်းအရှေ့တောင်ကောလိပ်များ , ထိပ်တန်းဗာဂျီးနီးယားကောလိပ်များ နှင့် တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများများအတွက်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများတွင် ။ ၎င်း၏သုတေသနအားသာချက်အဘို့, UVA အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ၏အစည်းအရုံးတွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ချီးမြှင့်နှင့်ကလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံအတွက်ခိုင်မာတဲ့အစီအစဉ်များကြောင့်ဂုဏ်သတင်းတစ်ခုအခနျးတှငျရရှိခဲ့င်ခဲ့သည် ဖိ Beta ကို Kappa ဂုဏ်အသရေလူ့အဖွဲ့အစည်းကို။
ကများ၏ရှေ့မှောက်၌ဂျက်ဖာဆန်တစ်ရုပ်တုနှင့်တကွ, Rotunda ဟာ Academic ကျေးရွာရဲ့အဆုံးမှာဂုဏ်ယူစွာရပ်တည်။ ဂျက်ဖာဆန်ရောမမြို့ရဲ့ Pantheon ပြီးနောက် Rotunda လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Pavilion ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဥယျာဉ်နှင့်အတူ Academic ကျေးရွာ၏ focal point တစ်ခုပါ။ တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲ 1853 ခုနှစ်ကဆက်ပြောသည်, ဒါပေမယ့်မီးကြောင့်ခဲ့သည်သာမြို့ပတ်ရထားအုတ်နံရံများအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Rotunda ဖြစ်လျှင်, စာကြည့်တိုက်ကိုချဲ့ထွင်အခမ်းအနားအာကာသဖန်တီးလျက်, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးကယျြဝနျးနိုင်ရန်အတွက်ရောမစတိုင်တစ်ခု Beaux ဝိဇ္ဇာအနက်အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ Rotunda အဆိုပါ UVA ကျောင်းဝင်းပေါ်အထင်ကရအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှအဆိုပါမြက်ခင်း (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါမြက်ခင်းဟာ Academic ကျေးရွာတက်စေသော Rotunda နှင့် Pavilion အကြားတည်ရှိသည်။ တဦးတည်းတက္ကသိုလ်ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာမူရင်း Jeffersonian အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုတွင်နေထိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဂုဏ်သိက္ခာမြက်ခင်းခန်းမှာနေထိုင်ဖို့ဂုဏ်အသရေစဉ်းစားသည်။ သူတို့ကလည်းအကြားအဆင့်နေကြသည် အကောင်းဆုံးကောလိပ်အိပ်ဆောင် မှထွက်ရှိ။ အဆိုပါအခန်းများသာကျကွီးရှယျအိုမြားမှမရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးအပြည့်အဝပရိဘောဂလာကြ၏။ အဆိုပါမြက်ခင်းတစ်လျှောက်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ Pavilion အဆိုပါအယူခံဝင်အရှိန်မြင့်ကြောင်းထူးခြားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Pavilion IV
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Pavilion IV (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Pavilion IV နှင့်၎င်း၏9အပေါင်းအဘော်ဂျက်ဖာဆန်ရဲ့မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုး Academic ကျေးရွာအတွင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများအဘို့အိမ်ရာအဖြစ်အရှေ့မြက်ခင်းတန်းစီ။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆောကျအဦဂျော့ခ်ျ Blaetterman အစောပိုင်း 1800 ခုနှစ်ခေတ်သစ်ဘာသာစကားများပါမောက္ခခဲ့ပေမယ့်သူကအပြင်ပန်းအနီရောင်ခြယ်သောအခါ, ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုညစ်ညူးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ စုံလင်သောပုံရိပ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်, ဂျက်ဖာဆန်စက်ရုံ, ဒီဇိုင်းနှင့် Pavilion IV ရဲ့နောက်ကွယ်ကကျော်ကြားတဲ့ပါမောက္ခ Schele က de Vere ရဲ့သေတ္တာဥယျာဉ်ကဲ့သို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ Pavilion နေထိုင်သူများချင်တယ်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Rouss ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Rouss ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
မူလက, Rouss ခန်းမအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းသျော, ဒါပေမယ့်ယခုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ McIntire ကျောင်းအမျိုးမျိုးမှ Robertson ကခန်းမနှင့်အတူ conjoins ။ နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦများဟာကျောင်းဝင်းစိမ်နှင့်မြက်ခင်းရန်နှင့်ဗဟိုဝင်းပတ်ပတ်လည်ကပ်လျက်တစ်ကြောက်မက်ဖွယ်မိတ်ဖက်ဖန်တီးသောအချစ်ဆုံး Jeffersonian ဗိသုကာစတိုင် fit ။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ McIntire ကျောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး, စာရင်းကိုင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သခင် '' ဒီဂရီကမ်းလှမ်းတဲ့အလွန်အမင်းမှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုရှိပါတယ်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှဟောငျး Cabell ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှဟောငျး Cabell ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ဟောငျး Cabell ခန်းမကိုတရားဝင်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်ရတာဟာအဖြစ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်နေရာပေးပါသည်။ ၎င်း၏ခနျးထိုင်ခုံ 994 ကလူနှင့် The ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစန္ဒရားလှူဒါန်းခဲ့ခဲ့သည်တစ်နှစ်ပြီးနောက်ရှမွေလသည် Baldwin ရွတ်ဆိုနေစဉ်အတွင်းခန်းမထံအပ်နှံခဲ့သည်ပြန် 1906. အတွက်အင်ဒရူးကာနက်ဂျီကလှူဒါန်းတဲ့ Skinner ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ "ဒီကျောင်းသားရဲ့တိုးတက်မှု" အမည်ရတစ်ခုတကျိပ်တပါးသော-panel ကနံရံဆေးရေးဂျက်ဖာဆန်ရဲ့အလေးပေးနှင့် UVA မှာ၎င်းတို့၏ပညာရေးခရီးကိုအခြားကျောင်းသားတစ်ဦး၏တန်ဖိုး။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Lambeth အိမ်
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Lambeth အိမ် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ဒေါက်တာဝီလျံအေ Lambeth များအတွက်ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဘယ်အရာကိုယခုပညာရေးဟင်းကျောင်းများအတွက်ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Lambeth အိမ်ကြောင့်တရားဝင်ဥယျာဉ်ကျော်က၎င်း၏အထင်ကြီးအမြင်ထဲကကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Brooks ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Brooks ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Brooks ခန်းမ, sociocultural ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်ဘာသာစကားဒေသများ၎င်း၏ subdivisions အတူမနုဿဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှရတာဟာ။ အဆိုပါအဆောက်အဦးကိုမူလကအသက်အရွယ်အစားကြီးမားသောနှင့်ဒိုင်နိုဆောပြပွဲနှင့်အတူပြတိုက်အဖြစ်ပြီးပြည့်စုံခြင်း, သဘာဝသိပ္ပံဝန်ကြီးအဖွဲ့အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် 1940 အတွက်၎င်း၏ဗစ်တိုးရီးယား Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာစတိုင်ဟာ Jeffersonian ထံမှကွဲပြားသောကြောင့်, သူ့ဟာသူ 1970 ခုနှစ်တွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်အချက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အဆိုပါအဆောက်အဦးကိုပိတ်ထား ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်အဆောက်အဦး၏ကျန်၏အစဉ်အလာ။ အဆောက်အဦး, ဒါပေမယ့်ကြောင့်အများပြည်သူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှဖြိုဖျက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တစ်ကြိမ်မှာ၎င်း၏ gargoyles နှင့်၎င်း၏မျက်နှာစာပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကျော်ကြားသည့်သဘာဝသမိုင်းပညာရှင်အမည်များနှင့်အတူ Brooks ခန်းမ, ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှစာမျက်နှာအိမ် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
သင်ကမက်ကော်မစ်လမ်းမကြီး Residence ဧရိယာအတွင်းရှိအခြားနေအိမ်သို့ခန်းမနှင့်အတူစာမျက်နှာအိမ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစာမျက်နှာအိမ် 30 ကိုသေးငယ်တစ်ခုတည်းခန်း၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ၎င်း၏နှစ်ဆထေိုအခန်း 125 ကျောင်းသားများကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်း UVA မှာဘဝမှအိမ်မှာသူတို့ရဲ့ဘဝကနေပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကူးအပြောင်းကိုကူညီအပြည့်အဝပရိဘောဂဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာမျက်နှာအိမ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောက်ပါကျောင်းသားလူဦးရေအတွက်တိုးလာထားရှိရန်နေအိမ်သို့ခန်းမများ၏မိသားစုမှထည့်သွင်းခဲ့သည်။
UVA မှာ Chapel တက္ကသိုလ်
UVA မှာတက္ကသိုလ် Chapel (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါတက္ကသိုလ် Chapel အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဂိုဏ်းမရှိသောန်ဆောင်မှုများအဘို့တည်လည်း UVA တစ်သာသနာပလူရာအရပျခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်တစ်ခုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ Gothic အဘိဓါန် Revival ဗိသုကာစတိုင်နှင့်အတူတက္ကသိုလ် Chapel, ကောင်းကင်ဘုံဆီသို့ဦးတည်ပုံစံမျိုးရယူမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်း၎င်း၏ 46 နိုင်အောင်ထိုင်ခုံ 250 ကလူ, ဒါပေမယ့်ကိုးကွယ်အံ့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုမရှိတော့အဲဒီမှာကျင်းပကြသည်။ အဲဒီအစား, မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်အောက်မေ့ဖွယ်န်ဆောင်မှုက၎င်း၏အပြင်ပန်း၏ကျယ်ပြန့်အဆောက်အဦးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖော်ပြခြင်းမ, အသုံးပြုမှုအတွက် Chapel စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Bavaro ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Bavaro ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ယခင်ကပညာရေးဟင်းကျောင်းအဖြစ်လူသိများ, Bavaro ခန်းမ UVA တစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးအချက်အချာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာ 55 ဒြေရုံးများ, 10 ညီလာခံခန်း,4အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများ, တစ်ဦးဟောပြောပွဲခန်းမနှင့်နှစ်ထပ်မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်ရတာဟာ။ အဆောက်အဦး၏ဖွင့်ပထမဦးဆုံးအထပ်ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများ, ဌာနမှူးရုံး၏, ညီလာခံများနှင့်အစည်းအဝေးနေရာများနှင့်ကော်ဖီဘားတစ်ခုဧရိယာ၏ပါဝင်ပါသည်။ အနီရောင်အုတ်, ထုံးကျောက်, သစ်သား၏ထူးခြားသောပေါင်းစပ်ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦးပစ္စည်းများလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းအဖြစ်ကျောင်းဝင်း၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Clark ကခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Clark ကခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Clark ကခန်းမပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံဦးစီးဌာနဂေဟဗေဒ, geosciences, ဇလဗေဒနှင့်လေထုသိပ္ပံသို့ပေးသောအကိုင်းထွက်မှနေအိမ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သောကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာအကြားအစဉ်အမြဲလက်တွဲ၏, Clark ကခန်းမကိုလည်းလေ့လာမှုနှင့် teleconferencing များအတွက်အခန်းကိုခွင့်ပြုရသောဘရောင်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာစာကြည့်တိုက်ရတာဟာ။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ကဥပဒေကျောင်းသျော, ဒါပေမယ့် 2003 ခုနှစ်က၎င်း၏ဘာသာပြောင်းပြီးနောက်နှစ်ခုသာပန်းချီကားများမောရှေနှင့်ရောမဥပဒေအပေါ်ရူပကတှေပုံဖော်နေဖြင့်ကျောင်းများ၏အကြွင်းအကျန်အဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။
UVA မှာ Bryan ခန်းမနှင့် McIntire ပွဲကြည့်စင်
UVA မှာ Bryan ခန်းမနှင့် McIntire ပွဲကြည့်စင် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါပွဲကြည့်စင်ကျောင်းသားစုဝေးများနှင့်ဂီတဖြစ်ရပ်များရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေရာအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ရပ်များ-ရှိမရှိကရန်ပုံငွေရှာ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပွဲတော်များ, ROTC စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းသားဟောင်းများစုဝေးင်အိမ်ရှင်အဖြစ်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုမှုကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်ပင်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Woodrow Wilson တက်ရောက်ခဲ့သည် UVA ၏ Centennial အခမ်းအနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗိသုကာပညာ၏ကျောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးခေါင်းကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းအတွင်းအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအသိခံစားရကူညီမျှော်လင့်ချက်အတွက်ထိုင်ခုံ arcing ၎င်း၏ကွန်ကရစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
အဆိုပါပွဲကြည့်စင်ကပ်လျက်တည်ရှိသော Bryan ခန်းမ, ဗာဂျီးနီးယားရဲ့အင်္ဂလိပ်ဦးစီးဌာနမှတက္ကသိုလ်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှကြက်ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ကြက်ခန်းမ 1898 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနှင့်မူလစက်မှု Lab မှသျောခဲ့သည်။ အခုတော့ကဂန္တဝင်နှင့်ဒဿနိကဗေဒဌာနအဖြစ် JS ကွန်စာကြည့်တိုက်ဘို့အများအားဖြင့်စာသင်ခန်းနှင့်ရုံးခန်းများရရှိထားပါသည်။ ဂန္ဗိုလ်ကြီး, ဒြေနှင့် grad ကျောင်းသားများကိုနီးပါးသုံးထောင်ကျမ်းမှ 24 နာရီလက်လှမ်းရှိသည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Garrett ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Garrett ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Garrett ခန်းမကိုမူလ 1909. စားပွဲထိုးများတွင် "အဆိုပါ Commons" ထမင်းစားခန်းခန်းမထိုကာလအတွင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအစေခံမယ်လို့နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်လျှင်, သငျသညျကိုတောင်အပိုဝေမျှရစေခြင်းငှါ, အဖြစ် Carr ကန့်ဟေးလ်အစားထိုး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ခေတ်အတွင်းစားပွဲထိုးကျောင်းသားတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစေခံလိုင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ Garrett ခန်းမလျှော့ချမျက်နှာကျက်, နားခန်းထဲမှာဖြည့်တစ်ဦးနှင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာစင်တာတစ်ခုနောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူတစ်ရုံးအာကာသဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့မြောက်မြားစွာပြုပြင်မှုများအပြီး, Garrett ခန်းမခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီ၏ဖရန့် Batten ကျောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Gilmer ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Gilmer ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Gilmer ခန်းမအဆိုပါဇီဝဗေဒနှင့်စိတ်ပညာဌာနရတာဟာနှင့်သုတေသနစက်ရုံအဖြစ်နှစ်ဆ။ ဒါဟာသောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန် UVA များအတွက်မူရင်းဒြေစုဆောင်းကူညီနေသူ Francis က Walker က Gilmer ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါခန်းမ 1963 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပါမောက္ခများ UVA မှာသင်ပေးဖို့ဆက်လက်သော Gilmer ခန်းမဖွင့်ပွဲကနေနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါဌာနများတက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာနှင့်တောင်တန်း Lake နှင့်တက္ကသိုလ်တဝိုက်ဇီဝဗေဒဘူတာနှင့်အတူနီးကပ်စွာပူးပေါင်း။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှမိုင်းနားခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
မိုင်းနားခန်းမဥပဒေများ၏ကျောင်းမူရင်းနေအိမ်အဖြစ် 1911 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်။ အခုတော့သူကစာသင်ခန်းနှင့်ရုံးခန်းများနှင့်အတူဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်ထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါခန်းမဘာလို့လဲဆိုတော့ 1932 အထိ UVA ရဲ့အဆောက်အဦး၏ဘက်စုံသုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်ကမိန့်ခွန်းများနှင့်ဒရာမာဦးစီးဌာနသျော။ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်ကိုလည်း Carter က G. အ Woodson Institute မှအတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Thornton ခန်းမ
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Thornton ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Thornton ခန်းမအင်ဂျင်နီယာနှင့်အသုံးချသိပ္ပံကျောင်းရတာဟာ။ အဆိုပါကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အရပ်ဘက်, ဓာတု, ဇီဝဆေးဝါး, လျှပ်စစ်နှင့်အာကာသအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ပစ္စည်းများသိပ္ပံတိကျတဲ့ဒီဂရီပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါခန်းမယခု stem အတွက် underrepresented ကျောင်းသားလူဦးရေစုဆောင်းမှုများနှင့် retention ကိုတိုးပွားစေရာမတူကွဲပြားခြင်းများအတွက် Center ကရရှိထားပါသည်။ အဆိုပါခန်းမမှာလည်းလူ့-Computer ကို Interaction များအတွက် UVA မှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Initiative အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစင်တာ, နှင့်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ 20 ကွန်ပျူတာစက်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများအနေဖြင့်သုံးနိုငျဘယ်မှာမဲဒီဇိုင်း Lab ကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
UVA Medical School ကျောင်းတွင်
UVA Medical School ကျောင်းတွင် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါ Medical School ကျောင်းတွင်နှစ်ခုထပ်-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်စစ်ရေးစင်တာနှင့်လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုစင်တာပါဝင်ပါသည်သော Claude Moore ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးအဆောက်အဦးကိုဗဟိုပြု။ ဤနည်း, ကျောင်းသားများဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေး၏အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သီအိုရီနှင့်၎င်းတို့၏လက်နှင့်ဆေးပညာလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ အခွားသောသာယာအဆင်ပြေမှုများဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်အပြန်အလှန်သင်ယူမှုများအတွက်သင်ယူစတူဒီယိုတစ်ခုက 24 နာရီလေ့လာမှုဧရိယာနှင့်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောကျန်းမာရေးသိပ္ပံစာကြည့်တိုက်တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကင်ဆာစင်တာ, တိုက်ပွဲအဆောက်အဦး (သားသမီးရဲ့ဆေးရုံ) နှင့်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ (ပြန်လည်သက်သာလာခြင်း) ကိုစာသင်ခန်းပြင်ပဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများက '' ပညာရေးယူနိုင်ရန်အတွက် Medical School က extension များအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
UVA မှာအထူးစုစည်းမှုများစာကြည့်တိုက် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
UVA မှာအထူးစုစည်းမှုများစာကြည့်တိုက်သန်း 16 ကျော်စာမူ, Archives မှတ်တမ်းများ, ရှားပါးစာအုပ်တွေ, မြေပုံများ broadsides, ဓာတ်ပုံများ, နှင့်အသံ / ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေပါတယ်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်က၎င်း၏ကျယ်ပြန့်အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်စာပေ၏စုဆောင်းခြင်း, ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အကြောင်းကိုသမိုင်း, UVA နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အရှေ့တောင်ဒေသ၏သမိုင်းအဘို့အလူသိများသည်။ အထူးစုစည်းမှုများစာကြည့်တိုက်လာမယ့် Alderman စာကြည့်တိုက်, တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏အဓိကစာကြည့်တိုက်ကိုဆိုလိုတာပါ။ အဆောက်အဦးရဲ့အရှေ့ဘက်, ယောဟန် 8:23 ပြည်နယ်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး pediment ပန်းပုများတွင် "သင်တို့သည်အမှန်တရားသိကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, အမှန်တရားကိုသင်အခမဲ့လုပ်ရမည်" အသိပညာအဘို့မိမိတို့ရှာပုံတော်အတွက် UVA ကျောင်းသားများကိုအားပေးရန်။
UVA စာအုပ်တိုက် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါ UVA စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဦးဆေးဆိုင်, ကျောင်းသားဟောင်းများအထူး, ကျောင်းဆင်းပွဲပစ္စည်းများ, ဖတ်စာအုပ်များ, ဝိညာဉျကိုအဝတ်အစား, နှင့်ကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပါဝင်သော non-အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ဆိုင်ပြပွဲ UVA နှင့်ဂျက်ဖာဆန်အကြောင်းကိုကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်စတော့ရှယ်ယာစာအုပ်တွေကလက်မှတ်ရေးထိုးစာအုပ်များရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းတွင်မာနထောင်လွှား immense ။ အဆိုပါ Darden ချိန်းအစီအစဉ်စာအုပ်ဆိုင်အစ်အောက်ကွန်ပျူတာနှင့် UVA လျှော့စျေးများအတွက်တစ်ဦးထွက်ပေါက်ကမ်းလှမ်းနေချိန်မှာစီးပွားရေး၏ Darden ကျောင်းများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတစ်ခုသီးသန့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရောင်းချမှု၏အဘို့ကိုပြန် Excellence များအတွက်ပဒေသာပင်များလည်းများအတွက်တက္ကသိုလ်, လိုအပ်ကြောင်း-based ပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေကြောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးအစီအစဉ်တတ်၏။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်အကြောင်းပိုမိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဝန်ခံဖို့အချိန်ယူလေ့လာသင်ယူဖို့, ထုတ်စစ်ဆေး UVA ပရိုဖိုင်း နှင့်ဤ UVA တက်ရောက်ရန် GPA, SAT နှင့် ACT ဂရပ် ။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနား Chapel Hill ဓာတ်ပုံခရီးစဉ်တက္ကသိုလ်
" 'ခရစ္စမတ်မီည Twas" ၏ရယ်စရာဗားရှင်း
ထိပ်တန်း 10 ဂန္ထဝင်အင်ဒီ-ရော့ခ်မှတ်တမ်း
"Sourire" (ပြုံးနေဖို့) အတွက်ရိုးရှင်းသော conjugation Learn
ဘယ်လိုအလိုအလျောက်ယာဉ်တည်နေရာ (AVL) စနစ်များလုပ်ငန်း
ဘယ်လို Frost, ခဲနှင့်ခက်ခဲကွဲပြားခြားနားသော
ကမ္ဘာမြေလက္ခဏာတွေ: Capricorn, Taurus နဲ့ Virgo
ATVs စီး Started Get
ထင်းရူးဖြီးအဆင့်လက်ခံရေးမှာ Arkansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
ပတ္တမြားရှိ "တောင်းဆို" Method ကို
သမိုင်းနှင့်ဟောက် '' အသက် 20 အရွယ်၏ Timeline ကို